I-China i-DL-Methionine CAS 59-51-8 ye-Food Grade (FCC / AJI / UPS / EP) abakhiqizi nabaphakeli | Honray
Igama lomkhiqizo: I-DL-Methionine
I-DL-methionine (Isifinyezo Met) ingenye yama-amino acid ayi-18, futhi ingenye yama-amino acid ayisishiyagalombili abalulekile esilwaneni nasemzimbeni womuntu. Isetshenziswa kakhulu njengezithasiselo zokuphakelayo ezinhlanzini, izinkukhu, izingulube nezinkomo ukuze kugcinwe izilwane nezinyoni zikhula kahle. Kungathuthukisa uketshezi lobisi lwezinkomo, kuvimbele ukuvela kwe-hepatosis. Ngaphandle kwalokho, ingasetshenziswa futhi njengemithi ye-amino acid, isisombululo somjovo, ukumnika okunomsoco, i-ejenti yesibindi esivikelayo, i-therapy isibindi isifo sokuqina kwesibindi kanye nesifo sohlobo lobuthi.
I-DL-methionine ingasetshenziswa ekuhlanganisweni kwamavithamini okwelapha, izithasiselo zokudla okunempilo nezithasiselo zokuphakelayo.
I-DL-methionine ingenye yezinto eziyinhloko zokufakwa kwe-amino acid kanye ne-amino acid. I-DL-methionine ine-anti-fatty liver function. Ukusizakala ngalo msebenzi, amavithamini okwenziwa okwenziwa angasetshenziswa njengamalungiselelo okuvikela isibindi.
Njenge-amino acid ebalulekile yomzimba womuntu, i-DL-methionine ingasetshenziswa njengesengezo sokudla ekudleni nasekucutshungweni okulondolozayo njengemikhiqizo yekhekhe lenhlanzi.
Yengezwe kokuphakelwa kwezilwane, i-DL-methionine ingasiza izilwane ukuthi zikhule ngokushesha ngesikhathi esifushane futhi cishe u-40% wokuphakelayo kwazo kungagcinwa.
Njengengxenye ebalulekile ekuhlanganisweni kwamaprotheni, i-DL-methionine inomthelela wokuvikela emisipha yenhliziyo. Ngasikhathi sinye, i-DL-methionine ingaguqulwa ibe yiTaurine ngesibabule, kuyilapho iTaurine inomphumela osobala kakhulu we-hypotensive. I-DL-methionine nayo inomsebenzi omuhle wokuvikela isibindi kanye nokukhipha ubuthi emzimbeni, ngakho-ke isetshenziswa kakhulu ekwelashweni kwemithi yezifo zesibindi njenge-cirrhosis, isibindi esinamafutha kanye ne-hepatitis ehlukahlukene ebukhali nehlala njalo. Inomphumela omuhle kakhulu.
Empilweni, i-DL-methionine iphezulu ekudleni okufana nembewu ye-sunflower, imikhiqizo yobisi, imvubelo nolwandle ulwelwe.
icacile futhi ayinambala
Langaphambilini I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 YeBanga Lokuphakelayo
Olandelayo: I-L-Isoleucine CAS 73-32-5 YeBanga Lokudla (AJI USP EP)
L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Ibanga Lokudla, I-Pharm Grade L-Leucine, L-Threonine Pharm Ibanga, Ukudla Kwezilwane,